DAREERAHA QOTOMISKA: CALAAMADAHA CAABUQA, SIDA LOO XIRO, IYO SIDOO KALE TALLAABOOYIN KA HORTAG AH - GURI, GURI
Ilaali ilmahaaga! Dhalinyaradu waxay leeyihiin waxyaabo ay ku tarmaan sida dulin
Qaar badan ayaa ku jira gurgaha guriga. Inkasta oo uu yahay mid wanaagsan, waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale boodo.
Waxay yihiin ku noolaan kaliya oo kaliyalaakiin sidoo kale tag xayawaanka kaleku nool qol isku mid ah.
In la aqoonsado dulin ka yaryar wiil yar yar waa dhibaato, maxaa yeelay markasta waa nadiif. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in la ogaado in wax qalad ah sababtoo ah xayiraad iyo boogo soo noqnoqda oo hoos u dhaca ah.
Muuqaal iyo qaab muuqaalkooda
Cayayaanka ku nool xayawaanka Dhab ahaan ma ahan mid ka duwan kuwa ku nool bisadaha, eyda. Waxay ka boodi karaan meel ilaa meel aan ku noolaan karin oo kaliya hamster, laakiin sidoo kale xayawaanka kale.
Jidhkoodu yar yahay, oo kaliya 3 mm. Ku dhowaad dhammaan jirka waa bunni.
Isku duuban sababtoo ah joogitaanka eeyga ama bisada ku dhow, sababtoo ah boodada waxay ku boodi karaan ilaa 30 cm. Sidoo kale martida aan la fileynin waxay ku keeni karaan qof kabaha ama dharka.
Aqoonsiga boodada ee hamster by calaamadaha
Sababtoo ah jiirka ayaa u muuqda in ay si joogto ah u xoqeen oo isu dhaqaan, go'aaminta joogitaanka boodada ee dharkooda ayaa ah mid dhib badan. Haddii mulkiiluhu u maleyo in ay wali degeen xayawaankiisa, waa inaad si dhow ula socotaa dhaqanka jiirka.
Sida ugu dhaqsaha badan ee hamster uu ku nasan waayey nadiifinta dhogorta, wuxuu arkay:
meeraha baldiyada meelaha maqaarka qaarkood;
xannibaadda aan weligeed jirin;
Calaamadahaas, jiirka waa in lagu muujiyo xoolaha..
Si aad u hubiso in boodada la heli karo, waxaad u baahan tahay inaad riixdo xayawaanka xayawaanka kala go 'oo aad aragto haddii cayayaanka yaryar ee mugdiga ah ay ku socdaan halkaas.
Waa maxay khatarta
Waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo jeexjeexka "martida" sida ugu dhakhsaha badan, sababtoo ah waxay:
samee jiiraanka si joogta ah;
wuxuu keeni karaa caabuq (tafatir, xanuun).
Hamster way kacsan tahay sababtoo ah cuncun xoog leh. Marka boodhku isku duro walaxiisa, jidhku wuxuu ka soo horjeedaa cuncun ba'an.
Dermatitis ayaa u muuqda, taas oo ka dhigaysa timo lumis, bararka maqaarka.
On candho qamiis Xajiin waxay yeelan kartaa falcelin sun ah. Maqnaanshaha tallaabooyinka ku habboon, dermatofiliaz ayaa laga yaabaa inuu kobciyo.
Iyadoo wadajir ahaan ay billaabanayaan boodada Gooryaanka ayaa muuqda. Waxay soo baxday in ay aad u halis u yihiin xoolaha iyo dadka. Iyagu ma quudiyaan dhiiga bani-aadamka, laakiin waxay ku baxaan calaamadaha jidhka.
Waa muhiim! Diyaargaroobka ayaa ku dhufanaya mobile. Haddii aadan qolka ku shaqeynin waqtigaa (oo aan ahayn qafiska), aad u dhow waxaa jiri doona qaar badan oo ka mid ah guriga.
Sidee looga boodi karaa hamster ka boodada
Waxaad ka saari kartaa boodada guriga, waxaa habboon in la iibsado badeecooyinka cayayaankaoo lagu iibiyey qaybo khaas ah. Waxaa loogu talagalay gaar ahaan ujeeddadaas mana waxyeelayn doono jiirka. Isticmaal marar badan budada insecticidal, buufin, waxay ku dhacdaa qallalan.
Shaambada shaambo lama isticmaali karosababtoo ah xamaaraduhu lama wadi karo. Hadda waxaa jira delicacies, walxaha firfircoon ee kaas oo cabsiinaya bambooyin yar yar on hamster ah.
Sida ugu dhaqsaha badan ee nidaamka baraarugyada taranka ay bilaabaan, waa in la ogaadaa in ay dirxiga ay ukuntu ku jiraan hamster, sidaa daraadeed, daaweynta waa in lagu fuliyaa oo kaliya maaha aagga qafiska.
Si daaweyntu u noqoto mid guuleysata, mustaqbalka, boodbadu ma helin fursad ay ku galaan dhulka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda cayayaanka u keeni karta.
Cadaadiska iyo aagga "deganaanshaha" waa in la daaweeyaa..
Sidoo kale lagugula taliyay nadiifinta hamster iyo gurigeeda qalab gaar ah. Isla markiiba ku dhaq saabuun xal, rooga, alaabta guryaha, dharka miisaska.
Waa muhiim inaad si joogto ah u fuliso ka hortagga.taas oo ilaalin doonta guriga iyo dadka deggan dadka dhiig-miirayaasha ah ee aan fiicnayn iyo kuwa aan qallafsaneyn. Wixii eyga waa inuu iibsado qoryaha, cayayaanka xasharaadka. Waa inay ku dhex socotaa ilaa iyo inta ay lagama maarmaan tahay marka la qoro.
Sidoo kale qadhaadh ayaa loo isticmaali karaakuwaas oo laamaha ku faafay wareegga xayawaanka gurigaaga. Waxay ka niyad-jabto martida aan la socon.
Koofiyadu waxay u baahan yihiin marar badan inay ku maydhaan xal gaar ah ama shaambo, dhibcaha dhibcaha dushooda, ayaa si gaar ah loogu abuuray cayayaanka.
Si kastaba ha ahaatee, joogitaanka boodada ee xayawaanka, waa inaad la tashataa takhasus, ugu yaraan fog. Tallaabooyinka wakhtiga la qaadaa waxay ka hortagayaan cawaaqib xumo iyo ilaalinta caafimaadka ee ma aha oo kaliya xayawaanka guriga, laakiin sidoo kale adiga ayaa iska leh.